ဒီမနက်ခင်းအလေ့အကျင့်တွေက ၀ိတ်ချနေပေမဲ့ ဝိတ်မကျရတဲ့တရားခံတွေပါတဲ့😮 – Trend.com.mm
ဒီမနက်ခင်းအလေ့အကျင့်တွေက ၀ိတ်ချနေပေမဲ့ ဝိတ်မကျရတဲ့တရားခံတွေပါတဲ့😮
Posted on June 26, 2018 by Noel
နေ့တစ်နေ့ရဲ့အစပထမကအရမ်းကိုအရေးကြီးပါတယ်။တစ်နေ့တာလုံးအတွက်ဒီမနက်ခင်းက အားပြည့်လန်းဆန်းဖို့စတင်တဲ့အချိန်ပါပဲ။ဒီလိုပဲ မနက်ခင်းမှာလုပ်မိတဲ့ အလေ့အကျင့် တစ်ချို့ကလည်းကိုယ်တွေရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်နဲ့သက်ဆိုင်နေပါတယ်တဲ့။အံ့သြစရာကြီးနော်။ဒီအလေ့အကျင့်လေးတွေကကိုယ်တွေဝိတ်ကျမကျနဲ့ဘယ်လိုများဆက်စပ်နေပါလိမ့်။သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ လေ့လာချက်တွေအရ ကိုယ်တွေလုပ်နေမိတဲ့ဒီအလေ့အကျင့်တွေကြောင့်ဝိတ်မကျတာပဲ လို့တွေ့ရှိရပါတယ်။
၀ိတ်ချမယ်လို့တွေးတာနဲ့ အစားလျှော့ရမယ်လို့ တန်းပြီးတွေးမိတတ်တယ်ဟုတ်! အစားလျှော့ရတာတော့မှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ အချိန်ကလည်းအရေးပါပါသေးတယ်။
မနက်ခင်းအစမှာတော့ ကိုယ့်အတွက်တစ်နေ့တာအာဟာရပြည့်ဝစေပြီး ကျန်းမာစေတဲ့ အစားအစာတွေစားပေးရမှာပါ။ကော်ဖီတစ်ခွက်၊မုန့်တစ်ချပ်ပဲစားပြီးဝိတ်ချမယ်ဆိုရင်တော့ ၀ိတ်ကျဖို့မမြင်ပါဘူး။အမျှင်ဓာတ်များပြားပြီး အာဟာရပြည့်ဝစေတဲ့အစားအစာတွေကို မနက်ခင်းမှာစားသောက်ပေးဖို့လိုပါတယ်။
နေရောင်ခြည်က အဆီဓာတ်ကိုသဘာဝအတိုင်းလောင်ကျွမ်းစေပါတယ်။အနည်းဆုံး white fat tissue တွေကို လောင်ကျွမ်းစေပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေရောင်ခြည်နဲ့လုံလုံလောက်လောက် မထိတွေ့တာကလည်း ၀ိတ်မကျရတဲ့အကြောင်းပါပဲ။ဆောင်းတွင်းဆို လူတွေက ပိုပြီးဝလာကြ တယ်လို့လည်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့် ၀ိတ်ကျချင်တယ်ဆိုရင် သင်လုပ်ရမှာက နေရောင်ခြည် နဲ့အနည်းငယ်ထိတွေ့ပေးဖို့ပါပဲ။မနက်ခင်း ၇ခွဲ၊၈ခွဲလောက်ဆိုနေရောင်ခြည်ခပ်နွေးနွေး လေးကျနေပါပြီ။အဲ့ဒီအချိန်ထီးဆောင်းဖို့မစဉ်းစားပဲ နေရောင်ခြည် အနည်းငယ်ခံယူပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
မနက်စာစားနေတုန်းရေသောက်တာထက် အိပ်ရာကနိုးလာပြီးရေတစ်ခွက်သောက်ပေးတာက ၀ိတ်ချတဲ့နေရာမှာအထောက်အကူပြုပြပါတယ်။ရေဟာအဆိပ်အတောက်တွေဖယ်ရှားပေးသလို အဆီတွေဖြစ်ပွားမှုကိုလည်းလျှော့ချပေးပါတယ်။အရွယ်ရောက်လူတစ်ယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရေဓာတ် ၅၅ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၆၀ရာခိုင်နှုန်းအထိလိုအပ်ပါတယ်တဲ့။ဒါကြောင့် မနက်နိုးတာနဲ့ ရေတစ်ခွက်သောက်ပေးပါ။အဆီဓာတ်ကို ၁၇ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၁၀ရာခိုင်နှုန်း
မနက်စောစောမှာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာက ကျန်တဲ့အချိန်မှာလုပ်တာထက် ကယ်လိုရီပိုပြီးလျှော့ချ ပေးနိုင်ပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးမဟုတ်တဲ့ပေါ့ပါးသွက်လက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်း မျိုးတွေလုပ်ပေးရုံနဲ့ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအစာအရမ်းစားချင်စိတ်ကိုလျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့။ လေ့လာသူပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Dr. Emma Stevenson နဲ့ Ph.D ကျောင်းသား Javier Gonzalez တို့ရဲ့ တွေ့ရှိချက်အရ မနက်စာမစားခင်လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်တဲ့သူတွေဟာ တစ်နေ့လုံး တစ်ခြားသူတွေထက်အစားနည်းတယ်လို့သိရပါတယ်။
တကယ်လို့ ကိတ်မုန့်၊ပေါင်မုန့်စတဲ့အရသာရှိပြီးချိုမြိန်တဲ့အစားအစာတွေကို မလျှော့နိုင်ဘူးဆိုရင် အဲ့ဒါတွေကိုမနက်ခင်းအချိန်မှာစားဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။နေ့လည်စာ၊ ညစာအဖြစ်ချိန်ထားပြီး စားတာက ပိုပြီးဝစေပါတယ်။မနက်ခင်းမှာစားမှသာ သွားလာလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့အတူ အဆီတွေခြေဖျက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မနက်နိုးတာနဲ့ဖုန်းလေးကောက်ကိုင်၊ဘာသတင်းတွေထူးပြီလဲဆိုတာကြည့်တတ်တဲ့အကျင့်ကို ပြင်စေချင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလို ကောင်းတဲ့သတင်းတွေ၊စိတ်မကောင်းစရာသတင်းတွေ ၊ကြောက်လန့်စရာသတင်းတွေဖတ်တာကသင့်ကျန်းမာရေးအတွက်မကောင်းစေပါဘူး။မကောင်းတဲ့သတင်းတွေကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုတွေဖြစ်လာတာကကိုယ်အလေးချိန်မကျစေတဲ့အကြောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ဖိစီးမှုက ကိုယ်အလေးချိန်တက်ရခြင်းရဲ့ တရားခံလည်းဖြစ်ပါသေးတယ်။
ဒီမနကျခငျးအလအေ့ကငျြ့တှကွေောငျ့ ၀ိတျခနြပေမေဲ့ ၀ိတျမကတြာတဲ့
မနကျခငျးမှာလုပျမိတဲ့အလအေ့ကငျြ့တဈခြို့ကလညျး ကိုယျတှရေဲ့ ကိုယျအလေးခြိနျနဲ့သကျဆိုငျနပေါတယျတဲ့။အံ့သွစရာကွီးနျော။ဒီအလအေ့ကငျြ့လေးတှကေ
ကိုယျတှဝေိတျကမြကနြဲ့ဘယျလိုမြားဆကျစပျနပေါလိမျ့။သိပ်ပံပညာရှငျတှရေဲ့ လလေ့ာခကျြတှအေရ ကိုယျတှလေုပျနမေိတဲ့ဒီအလအေ့ကငျြ့တှကွေောငျ့
၀ိတျခမြယျလို့တှေးတာနဲ့ အစားလြှော့ရမယျလို့ တနျးပွီးတှေးမိတတျတယျဟုတျ! အစားလြှော့ရတာတော့မှနျပါတယျ။ဒါပမေဲ့ အခြိနျကလညျးအရေးပါပါသေးတယျ။
မနကျခငျးအစမှာတော့ ကိုယျ့အတှကျတဈနတေ့ာအာဟာရပွညျ့ဝစပွေီး ကနျြးမာစတေဲ့ အစားအစာတှစေားပေးရမှာပါ။ကျောဖီတဈခှကျ၊မုနျ့တဈခပျြပဲစားပွီးဝိတျခမြယျဆိုရငျတော့ ၀ိတျကဖြို့မမွငျပါဘူး။အမြှငျဓာတျမြားပွားပွီး အာဟာရပွညျ့ဝစတေဲ့အစားအစာတှကေို မနကျခငျးမှာစားသောကျပေးဖို့လိုပါတယျ။
နရေောငျခွညျက အဆီဓာတျကိုသဘာဝအတိုငျးလောငျကြှမျးစပေါတယျ။အနညျးဆုံး white fat tissue တှကေို လောငျကြှမျးစပေါတယျ။ဒါပမေဲ့နရေောငျခွညျနဲ့လုံလုံလောကျလောကျ မထိတှတေ့ာကလညျး ၀ိတျမကရြတဲ့အကွောငျးပါပဲ။ဆောငျးတှငျးဆို လူတှကေ ပိုပွီးဝလာကွ တယျလို့လညျးတှရှေိ့ခဲ့ရပါတယျ။ဒါကွောငျ့ ၀ိတျကခြငျြတယျဆိုရငျ သငျလုပျရမှာက နရေောငျခွညျ နဲ့အနညျးငယျထိတှပေ့ေးဖို့ပါပဲ။မနကျခငျး ရခှဲ၊၈ခှဲလောကျဆိုနရေောငျခွညျခပျနှေးနှေး လေးကနြပေါပွီ။အဲ့ဒီအခြိနျထီးဆောငျးဖို့မစဉျးစားပဲ နရေောငျခွညျ အနညျးငယျခံယူပေးဖို့ မမပေ့ါနဲ့။
မနကျစာစားနတေုနျးရသေောကျတာထကျ အိပျရာကနိုးလာပွီးရတေဈခှကျသောကျပေးတာက ၀ိတျခတြဲ့နရောမှာအထောကျအကူပွုပွပါတယျ။ရဟောအဆိပျအတောကျတှဖေယျရှားပေးသလို အဆီတှဖွေဈပှားမှုကိုလညျးလြှော့ခပြေးပါတယျ။အရှယျရောကျလူတဈယောကျရဲ့ခန်ဓာကိုယျမှာရဓောတျ ၅၅ရာခိုငျနှုနျးကနေ ၆ဝရာခိုငျနှုနျးအထိလိုအပျပါတယျတဲ့။ဒါကွောငျ့ မနကျနိုးတာနဲ့ ရတေဈခှကျသောကျပေးပါ။အဆီဓာတျကို ၁ရရာခိုငျနှုနျးကနေ ၁ဝရာခိုငျနှုနျး
မနကျစောစောမှာ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျတာက ကနျြတဲ့အခြိနျမှာလုပျတာထကျ ကယျလိုရီပိုပွီးလြှော့ခြ ပေးနိုငျပါတယျ။ပွငျးထနျတဲ့လကေ့ငျြ့ခနျးမြိုးမဟုတျတဲ့ပေါ့ပါးသှကျလကျတဲ့လကေ့ငျြ့ခနျး မြိုးတှလေုပျပေးရုံနဲ့ သငျ့ခန်ဓာကိုယျထဲမှာအစာအရမျးစားခငျြစိတျကိုလြှော့ခပြေးနိုငျပါတယျတဲ့။ လလေ့ာသူပညာရှငျတဈယောကျဖွဈတဲ့ Dr. Emma Stevenson နဲ့ Ph.D ကြောငျးသား Javier Gonzalez တို့ရဲ့ တှရှေိ့ခကျြအရ မနကျစာမစားခငျလကေ့ငျြ့ခနျးပုံမှနျလုပျတဲ့သူတှဟော တဈနလေုံ့း တဈခွားသူတှထေကျအစားနညျးတယျလို့သိရပါတယျ။
တကယျလို့ ကိတျမုနျ့၊ပေါငျမုနျ့စတဲ့အရသာရှိပွီးခြိုမွိနျတဲ့အစားအစာတှကေို မလြှော့နိုငျဘူးဆိုရငျ အဲ့ဒါတှကေိုမနကျခငျးအခြိနျမှာစားဖို့အကွံပေးခငျြပါတယျ။နလေ့ညျစာ၊ ညစာအဖွဈခြိနျထားပွီး စားတာက ပိုပွီးဝစပေါတယျ။မနကျခငျးမှာစားမှသာ သှားလာလှုပျရှားမှုတှနေဲ့အတူ အဆီတှခွေဖေကျြနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
မနကျနိုးတာနဲ့ဖုနျးလေးကောကျကိုငျ၊ဘာသတငျးတှထေူးပွီလဲဆိုတာကွညျ့တတျတဲ့အကငျြ့ကို ပွငျစခေငျြပါတယျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလို ကောငျးတဲ့သတငျးတှေ၊စိတျမကောငျးစရာသတငျးတှေ ၊ကွောကျလနျ့စရာသတငျးတှဖေတျတာကသငျ့ကနျြးမာရေးအတှကျမကောငျးစပေါဘူး။မကောငျးတဲ့သတငျးတှကွေောငျ့စိတျဖိစီးမှုတှဖွေဈလာတာကကိုယျအလေးခြိနျမကစြတေဲ့အကွောငျးတဈခုလညျးဖွဈပါတယျ။စိတျဖိစီးမှုက ကိုယျအလေးခြိနျတကျရခွငျးရဲ့ တရားခံလညျးဖွဈပါသေးတယျ။
Single Life ကိုစွန့်ခွာပြီး အချစ်ကိုရှာတော့မယ်ဆိုရင် ဒါလေးတွေကသင့်အတွက်အသုံးဝင်မှာပါ 😉